Arsenal oo Ka Badisay Kooxda Queens Park Rangers “Sawirro” – Radio Muqdisho
Arsenal oo Ka Badisay Kooxda Queens Park Rangers “Sawirro”
Kooxda Arsenal ayaa garoonkeeda Emirates Stadium 2-1 uga badisay kooxda Queens Park Rangers.
Kooxda Arsenal ayaa bilowgii ciyaarta heshay rigoore,waxana u laaday ciyaaryahan Alexis Sanchez,iyadoo uu ka qabtay goolka hayaha kooxda Queens Park Rangers Robert Green.
Ciyaaryahan Alexis Sanchez ayaa dhamaadkii ciyaarta gool madax ah u dhaliyay kooxda Arsenal,sidasi ayaana lagu kala nastay qeybtii hore ee ciyaarta.
Ciyaaryahan Olivier Giroud ayaa bilowgii qeybtii labaad ee ciyaarta kaarka casaanka ah ka qaatay kooxda Arsenal,ka dib markii uu teesto ku dhuftay ciyaaryahan Nedum Onuoha.
Ciyaaryahan Tomas Rosicky ayaa daqiiqadii 65-aad ee ciyaarta goolka labaad u dhaliyay kooxda Arsenal.
Ciyaaryahan Charlie Austin ayaa daqiiqadii 79-aad ee ciyaarta gool rigoore ah u dhaliyay kooxda Queens Park Rangers.
Kooxda Arsenal ayaa kala horeynta horyaalka ingiriiska uga jirto kaalinta lixaas,waxana ay leedahay 30-dhibcood,halka kooxda Queens Park Rangers ay horyaalka uga jirto kaalinta 16-aad,iyadoo leh 17-dhibcood.
Madaxweyne Xasan Sheekh oo cambaareeyey wararkii Xarunta Amisom